Alnico Igwe Ọdụdọ Ihe, China Alnico Igwe Ọdụdọ Ihe Manufacturers, Suppliers, Factory - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Alnico Igwe Ọdụdọ
Ihe alnico (nke nwere aluminom, nickel, na cobalt nwere obere ihe ndị ọzọ gụnyere titanium na ọla kọpa) kwere ka ndị latitude na-enye ihe ngosi dị elu, ume dị elu na mmekọrịta dị elu. A na-eji ihe ndị dị na Alnico mara ezigbo mma ma na-eguzogide demagnetization site na ịma jijiji na ujo. Alnico magnets na-enye ọnọdụ kachasị mma nke ọnọdụ ọ bụla nke magnet dị. Enwere ike iji ha maka ọrụ ọrụ na-aga n'ihu ebe enwere ike ịtụ anya oke ọkụ ruo 930F.
A na-arụpụta ihe ndị dị na Alnico site na nkedo ma ọ bụ usoro ntụgharị. Alnico magnet siri ike ma na-emebi emebi. Machining ma ọ bụ mkpọpu ala-apụghị mere-arụzu site nkịtị ụzọ. A na-ahụkarị oghere na foundry. A na-atụba nju ma ọ bụ tinye ya n 'anya dị ka o kwere mee iji mee ka ọ dị elu ka e wee belata ihe na-eme ka abrasive mechaa akụkụ na njedebe.
Pụrụ iche mgbatị usoro iji nweta ndị pụrụ iche crystalline ọka nghazi dị na alnico 5 na 8 akara ule. Emere akara anisotropic a iji mepụta nrụpụta magnetik dị elu na ntụpọ akọwapụtara. A na-enweta nghazi n'oge ọgwụgwọ ọkụ, site na ịjụ nkedo site na 2000F na ọnụego a na-achịkwa n'ime oghere magnet nke kwekọrọ na ntụgharị magnetization kachasị mma. Alnico 5 na Alnico 8 bụ ndị anisotropic ma gosipụta ụzọ kachasị mma maka nghazi, a ga-akọwapụta nghazi magnet na ịbịaru gị mgbe ị zitere anyị iwu.
Cast Alnico 5 bụ nke a na-ejikarị eme ihe maka ihe nkedo niile nke Alnico's .Ọ na-agwakọta ihe ngosi dị elu na ngwaahịa dị elu nke 5 MGOe ma ọ bụ karịa ma jiri ya rụọ ọrụ nke ukwuu na igwe ntụgharị, nkwukọrịta, mita na akụrụngwa, ngwaọrụ nyocha na ijide ngwa. Nguzogide dị elu nke demagnetization (mmanye mmanye) nke Alnico 8, ọdịnaya cobalt na 35%, na-enye ohere ka ihe a rụọ ọrụ nke ọma maka ogologo dị mkpụmkpụ ma ọ bụ maka ogologo na oke mgbatị nke ihe na-erughị 2 ka 1.
Sintered Alnico ihe na-enye ubé ala magnetik Njirimara ma butter n'ibu e ji mara karịa nkedo Alnico ihe. Sịlịk Alnico ndị kachasị mma na obere nha (ihe na-erughị 1 oz.) Na usoro a. Ngwakọta ngwakọta achọrọ nke ntụ ntụ na-eme ka ọ dịrị na nha na ọnwụ, wee tinye ya na 2300 F na ikuku hydrogen. Usoro nsị ahụ dị mma maka imepụta nnukwu olu, yana nsonaazụ n'akụkụ nke siri ike karịa ihe ndọta. Enwere ike ịnweta nkwụsị dị nso na-enweghị egweri.
Njirimara nke Alnico Magnet:
* Obere mgbanwe na magnetik Njirimara ka okpomọkụ mmetụta
* Oke arụ ọrụ okpomọkụ nwere ike ịdị elu dị ka 450oC ~ 550oC.
* Ike mmanye ume.
* Ike corrosion eguzogide ikike, ọ dịghị mkpuchi mkpa maka elu nchedo.
• Kwesịrị ekwesị maka obere nju olu nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya
• kọmpat kristal, elu siri
• shapegachi udi, nkenke size
• Ọbụna ọcha, mụ arụmọrụ
• Kwesịrị ekwesị maka magnet
• magburu onwe okpomọkụ kwụsie ike (temp. Ọnụọgụ nke Br bụ onye pekarịsịrị n'etiti ndị ọzọ niile na-adịgide adịgide nju
Njirimara Magnetic na Physical nke Cast Alnico Magnet
ọkwa Ẹkot MMPA Klas Ntughari Ike mmanye Oke Ike Ngwaahịa njupụta Reversible Na Na Na. Ọnụọgụ Reversible Na Na Na. Ọnụọgụ Curie Temp. Temp. Ọnụọgụ jaa
Br Hcb (BH) kacha g / cm3 α Nkem Nkem （Hcj） TC TW
LN10 ALNIKO3 600 6000 40 500 10 1.2 6.9 -0.03 -0.02 810 450 Isotropy
NKP 13 ALNIKO2 700 7000 48 600 12.8 1.6 7.2 -0.03 + 0.02 810 450
LNGT18 ALNIKO8 580 5800 100 1250 18 2.2 7.3 -0.025 + 0.02 860 550
NKP 37 ALNIKO5 1200 12000 48 600 37 4.65 7.3 -0.02 + 0.02 850 525 Anisotropy
NKP 40 ALNIKO5 1250 12500 48 600 40 5 7.3 -0.02 + 0.02 850 525
NKP 44 ALNIKO5 1250 12500 52 650 44 5.5 7.3 -0.02 + 0.02 850 525
NKP 52 ALNIC05DG 1300 13000 56 700 52 6.5 7.3 -0.02 + 0.02 850 525
NKP 60 ALNICO5-7 1350 13500 59 740 60 7.5 7.3 -0.02 + 0.02 850 525
LNGT28 ALNIKO6 1000 10000 57.6 720 28 3.5 7.3 -0.02 + 0.03 850 525
LNGT38 ALNIKO8 800 8000 110 1380 38 4.75 7.3 -0.025 + 0.02 860 550
LNGT60 ALNIKO9 900 9000 110 1380 60 7.5 7.3 -0.025 + 0.02 860 550
Njirimara Magnetic na Physical nke Magnet Alnico Sintered
akara ule Ẹkot MMPA Klas Ntughari Ike mmanye Ike mmanye Oke Ike Ngwaahịa njupụta Reversible Na Na Na. Ọnụọgụ Curie Temp. Temp. Ọnụọgụ jaa
Br Hcj Hcb (BH) kacha g / cm3 α Nkem Nkem TC TW
SLN8 Ogho 3 520 5200 43 540 40 500 8-10 1.0-1.25 6.8 -0.02 760 450 Isotropy
SLNG12 Ogho 2 700 7000 43 540 40 500 12-14 1.5-1.75 7.0 -0.014 810 450
SLNGT18 Ogho 8 600 6000 107 1350 95 1200 18-22 2.25-2.75 7.2 -0.02 850 550
SLNGT28 Ogho 6 1000 10000 57 710 56 700 28-30 3.5-3.8 7.2 -0.02 850 525 Anisotropy
SLNG34 Ogho 5 1100 11000 51 640 50 630 34-38 3.5-4.15 7.2 -0.016 890 525
SLNGT31 Ogho 8 780 7800 106 1130 104 1300 33-36 3.9-4.5 7.2 -0.02 850 550